Isibonisi esine-LED, isikrini se-LED, i-Led Video Wall, i-Led Billboard
Isibonisi se-LED sangaphakathi
Ukukhangisa kwe-LED Display
Isibonisi se-LED esiguquguqukayo
Isibonisi se-LED sangaphandle
I-perimeter LED Display
Isibonisi se-LED saphansi
Isibonisi se-COB se-LED
I-Taxi Top LED Display
isibonisi esiholela ngaphandle
umbukiso oholwa ngamatekisi
I-COB LED Display 8K Resoluti...
600×337.5mm Usayizi Ojwayelekile we-ViuTV Series isebenzisa isilinganiso esingu-16:9 segolide...
I-Digital LED Billboard ye-O...
960x960mm Usayizi Ojwayelekile SRYLED MG uchungechunge lwephaneli yokubonisa ye-LED ...
Isikrini se-LED esiqashwayo sangaphandle F...
Awukho Umehluko Kumamojula Akwesokunxele Nakwesokudla Ahlukile nge-ot...
Yasungulwa ngo-2013, i-SRYLED ingumkhiqizi wokubonisa we-LED ohamba phambili ozinze e-Shenzhen, sisebenza ngokukhethekile ekuhlinzekeni ngezinhlobonhlobo eziningi zekhwalithi ephezulu, imikhiqizo ethembekile ukuze ivumelane nezinhlelo zokusebenza ezihlukahlukene, okuhlanganisa ukukhangisa kwe-LED kwangaphakathi nangaphandle, isibonisi se-LED esiqashisayo sangaphakathi nangaphandle, Isibonisi se-LED somjikelezo webhola, isibonisi se-LED esinephimbo elincane, isibonisi se-LED sephosta, isibonisi se-LED esobala, isibonisi se-LED esiphezulu setekisi, isibonisi se-LED yaphansi nesibonisi se-LED somumo okhethekile.
I-XR Virtual Production Studio ...
Kusukela ngo-2022, ukukhiqizwa okubonakalayo kwe-XR sekuphenduke okuvelele kuma-studio we-TV ekhaya ...
Kungani Uthenga I-COB LED Display?
Inqubekelaphambili yanoma iyiphi inkathi izozala ubuchwepheshe obusha obuhlukahlukene nemikhiqizo....
Indlela Yokukhetha Okukhanyayo Okulungile...
Njengoba sonke sazi, ukukhanya kwesibonisi se-LED kuyipharamitha ebalulekile.Okweyunithi...
I-COB-Ithrendi Enkulu Yekusasa LE...
Njengoba imakethe ye-micro-pitch iqhubeka nokushisa, i-4K ne-8K high-definition kancane kancane...
Umshayeli IC Dlala I-R Ebalulekile...
Imikhiqizo yomshayeli wesibonisi se-LED ikakhulukazi ifaka ama-chips omshayeli wokuskena amarowu kanye ne-chip yomshayeli wekholomu...
Ama-Olimpiki Wasebusika e-Beijing Avalwa...
NgoFebhuwari 20, ilangabi lama-Olympic ebelivutha izinsuku eziyi-17 lacisha kancane kancane...
Isibonisi se-LED esikhulu kunazo zonke emhlabeni ...
Kusihlwa ngoFebhuwari 4, 2022, isibonisi sesikrini esikhulu se-LED phansi kwe-N...
Izibonisi ze-LED Yenza i-2022 Wi...
Ngokuphothulwa ngempumelelo komcimbi wokuvulwa kwama-Olimpiki Wasebusika waseBeijing, ...
SRYLED Ukubuyela Emsebenzini kusuka eLuna...
Amakhasimende nabangane abathandekayo, i-SRYLED ibuyile emsebenzini ngoFebhuwari 9, 2022, wonke ama-LED...
Aphi amathuba okuthi...
Kusukela ngo-2021 kuya ku-2022, iMetaverse isiphenduke insimu entsha efunwa izimboni ezahlukahlukene ...
Amakhasimende athandekayo nabangane abalandela i-SRYLED, 2021 isihambile, kanti u-2022 omusha, ugcwele ...
Yiziphi Izinto Okufanele Uzicabangele...
Isethi ephelele yesibonisi se-LED esinemibala egcwele ikakhulukazi ihlanganisa izingxenye ezintathu, ikhompuyutha, isilawuli...
Ngemibuzo mayelana nemikhiqizo yethu noma uhlu lwamanani, sicela usishiyele imilayezo futhi sizokuthinta emahoreni angu-8.
Isibonisi semoto ye-SRYLED ye-LED ifanele zonke izinhlobo zemodeli yemoto, imvamisa ukufakwa ophahleni lwamatekisi.Ukukhanya kwayo kungalungiswa ngokuzenzakalelayo (isidingo sokwengeza inzwa yokukhanya) ngesikhathi esihlukile.
Isibonisi se-SRYLED sangaphandle se-LED sinezinga le-IP 65 elingangeni manzi, singasetshenziswa kuzo zonke izinhlobo zesimo sezulu.Ukukhanya okuphezulu okungu-4500 - 7000 nits kwangaphandle kwesibonisi se-LED, esingajwayelana nezimo ezihlukile zangaphandle.
Isibonisi se-UHD LED
I-SRYLED ingakhiqiza isibonisi esincane kakhulu se-LED esingu-P0.9, ingafinyelela ukulungiswa kwe-4K yangempela ne-8K ngendawo encane.Ngaphandle kwalokho, siphinde sibe ne-P1.25, P1.56, P1.6, P1.8, P1.9 HD isibonisi se-LED ukuze sivumelane nemisebenzi ehlukene.
Isiteji se-LED Display
Isibonisi se-LED sesiteji se-SRYLED silula futhi sincane, kulula ukukuhlanganisa nokusikhipha.Iphaneli eyodwa ye-LED ingahlanganiswa ngemizuzwana eyi-10.Zonke izibonisi ze-LED zesiteji sethu zinezinga eliphezulu lokuvuselela okungenani elingu-3840Hz, ukuze kuqinisekiswe isithombe esihle sekhwalithi uma uthwebula.
Uma uvala isibonisi se-poster LED, singasetshenziswa njengesibuko.Uma ivuliwe, ingabonisa amavidiyo nezithombe zokukhangisa.Umkhiqizo ophelele wombukiso, imigoqo, izitolo zokudayisa kanye nedeski langaphambili lebhizinisi.
Isibonisi semoto ye-LED
I-Shenzhen SRYLED Photoelectric Co., Ltd